I-China A-6 ~ Umatshini wokuLawula iiYunithi kunye nabavelisi | Lide
Indibano yolawulo yiyunithi yeentonga zolawulo ezimbini okanye nangaphezulu ezibekwe kwindawo yolwandiso ukusuka kwindalo ukuya kwindalo yokunciphisa umonakalo onokubakho kulwandiso lohlanganiso olubangelwa kukushukuma okuphezulu kwepayipi. Iindibano zokulawula iintonga zisetwa kwelona nqanaba liphezulu livumelekileyo kunye / okanye ukusikwa kwendibaniselwano kwaye iya kuthatha uxinzelelo oluxineneyo oluphuhliswa kwindawo yokudibanisa. Xa zisetyenziswa ngale ndlela, zizinto ezongezekayo zokhuseleko, ukunciphisa ukungaphumeleli kokudityaniswa kunye nokwenzeka komonakalo kwezixhobo. Iiyunithi zokulawula ziya kukhusela ngokufanelekileyo ukudibanisa, kodwa umsebenzisi kufuneka aqiniseke ukuba amandla wombhobho we-plange anele ukumelana namandla apheleleyo aya kudibana.
Iiyunithi zolawulo kufuneka zisetyenziswe xa zingenakho ukwenzeka kwisakhiwo esinikiweyo ukubonelela ii-ankile kwindawo efanelekileyo. Kwiimeko ezinjalo, uxinzelelo lwe-tuli olundileyo kwinkqubo luya kubangela ukwanda okudibeneyo ukwandisa ukuya kumda obekwe ziintonga zolawulo eziya kuthi emva koko othintele ngaphandle kwentshukumo ethe kratya eyonyusa indibaniselwano. Ngaphandle kwesithintelo sokwenza ukuba iintonga zolawulo zidibane, kufuneka zisetyenziswe xa ukunikezelwa kwe-anch efanelekileyo kunganikezelwa. Ayinakugxininiswa kakhulu ukuba ukudibanisa irabha, ngokudibeneyo komsebenzi wayo, ayiyenzelwanga ukuba ithathe ukuphela kwaye, kuzo zonke iimeko apho kunokwenzeka ukuba kwenzeke, ukuqiniswa okufanelekileyo kubalulekile. Ukuba le nyaniso ayityeshelwa, ukusilela kwangaphambi kokudityaniswa kwesihlanganisi sisiphelo sokuxolelwa.
UFlange Bolt kunye noNut
Ubungakanani bePipe yegama
Ubuninzi boLawulo lwePlate ye-OD
Ubukhulu beDayimitha ebomvu
Ubuninzi bePlates yokuLawulwa kwePlate
Uxinzelelo oluphezulu lovavanyo lweTester yeNkqubo (uxinzelelo lovavanyo ngamaxesha ayi-1.5 koxinzelelo lokusebenza)
Inani leeNtambo zoLawulo ezicetyiswayo
Uxinzelelo oluphezulu lweeYunithi zoLawulo ezingafakwanga
Uvavanyo -Vavanya-ukuSebenza okuSebenza
Ubungakanani bombhobho oqhelekileyo
Amacandelo enduku acetyiswayo ngokobukhulu:
Edlulileyo: A-7 ~ Isixhobo Sombhobho weRubber
Okulandelayo: Umanyano lwe-A-5 ~